दौडिने हो कि ? - खेलकुद - साप्ताहिक
जेठ ११ गते शनिबार । दौडिनुपर्छ भन्ने सोच तपाईंमा छ भने यो दिनका लागि तयार हुनुहोस् । कान्तिपुर हाफ म्याराथनको आठौं संस्करण त्यही दिन आयोजित हुँदैछ । भनिरहनु पर्दैन, आयोजना सुरु भएको नवौं वर्षमा प्रवेश गर्दा यो अझ बृहत् हुनेछ र यही दिनका लागि भनेर व्यग्र प्रतीक्षा गर्नेहरू अब धेरै भैसकेका छन् । कान्तिपुर पब्लिकेसनले आफ्नो वार्षिक उत्सवका अवसरमा पहिलो पटक २०६७ मा यसको आयोजना गरेको थियो ।
पोहोरदेखि हो, यो दौडलाई अझ व्यवस्थित तुल्याउन फरक दिन सञ्चालन गर्न थालिएको । गत वर्षको कान्तिपुर म्याराथन जेठ ५ मा भएको थियो, यसपटक जेठ ११ मा परेको छ, दौड । दौड सुरु हुन एक साताजति समय बाँकी छ र दौडका पारखीलाई प्रश्न नै हो, तपाई पनि दौडिने हो कि ? इच्छुक हुनुहुन्छ भने कान्तिपुर पब्लिकेसनको मुख्य कार्यालय सेन्ट्रल बिजेनस पार्क, थापाथलीमा स्वागत छ, बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म ।
यो दौडको फारम सिटिजन्स बैंकका शाखाहरूमा पनि उपलब्ध छन् । सबैभन्दा पहिले दौडको प्राविधिक पक्ष । यसपटकको दौडलाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिनेछ । हाफ म्याराथन त दौडको प्रमुख विधा नै भयो । महिला र पुरुष दुवैमा हुने दौड २१ दशमलव १ किलोमिटर हुनेछ । दोस्रो विधा कर्पोरेट र मिडिया दौड । यो पनि महिला र पुरुष दुवैमा खुल्ला छ । यो पाँच किलोमिटरको दौड हुनेछ । अर्को भनेको ह्विलचेयर दौड हो । यो पनि महिला र पुरुष दुवैमा खुला छ ।
हाफ म्याराथन व्यवसायिक खेलाडीका लागि हो भने कर्पोरेट र मिडिया दौड सचेत नागरिकका लागि । सिटिजन बैंक प्रमुख प्रायोजक रहेको यस पटकको दौड केवल दौडमै मात्र सीमित भने रहने छैन । यसको उद्देश्य छ— जनचेतना बढाउने । यसपटकको नारा नै छ, एन्टि पोलुसन रन । त्यसको अर्थ काठमाडौंलाई प्रदूषणमुक्त सहर बनाउन जनचेतना बढाउने, दौड यसमै केन्द्रित छ ।
खासमा भन्ने हो भने विश्वका प्रत्येक नाम चलेका र ठूला सहरमा आफ्नै नामको म्याराथन हुन्छ ।